Glenelg Deluxe Apartment @ Liberty - I-Airbnb
U-Marta Ungumbungazi ovelele
Leli fulethi eliwubukhazikhazi elifakwe ngokugcwele igumbi elilodwa lokulala eline-balcony enkulu litholakala e-Glenelg futhi lingaphakathi kwamamitha ayi-100 ogwini. Itholakala esitezi sesi-3 seLiberty Apartment Buildings ekwazi ukufinyelela endaweni yokuzivocavoca, indawo yokubhukuda yasendlini, i-sauna kanye ne-spa. Efulethini kukhona i-WiFi kanye neziteshi zeNetflix.
Leli fulethi elibanzi elinegumbi lokulala elilodwa linendawo yokuphumula yohlelo oluvulekile, ikhishi nendawo yokudlela. Igumbi lokulala elinombhede ka-Queen linezingubo ezakhelwe ngaphakathi kanye nezicabha ezishelelayo ezimbili eziholela kuvulandi obude obuphindwe kabili. Ekamelweni lokuphumula kukhona osofa ababili ukuze ukhululeke futhi ubukele i-TV.
Ikhishi lifaka ifriji, isitofu, ihhavini, i-microwave nomshini wokuwasha izitsha. Ihlome ngokuphelele ngezinto zikagesi, izitsha, izinto zokusika nezibuko.
Kuhlinzekwa amashidi, imicamelo, amathawula nokomisa izinwele.
Zonke izinsiza ezakhiweni ezihlanganisa i-lift kanye ne-car park zingafinyelelwa kuphela ngekhadi lakho lokufinyelela ngokuvikeleka.
I-Glenelg iyimizuzu eyi-10-15 kuphela ukusuka e-Adelaide CBD (Central Market) kanye nesikhumulo sezindiza. Uhambo olufushane lwemizuzu engama-30, kwithilamu esuka enkabeni ye-Glenelg - Moseley Square, kukuyisa eVictoria Square enkabeni ye-Adelaide.
Leli fulethi liseduze noGlenelg Jetty Road kanye ne-Holdfast Shores Marinara Promenade okuyipharadesi labathandi bokudla abavela ezindaweni zokudlela ezihlala abantu abaningi, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela ezinhle.
Isikhungo sokuthenga esiqondile seHarbour Town, siyimizuzu eyi-10 nje ukusuka eGlenelg.
Leli fulethi liseduze ne-Visitor Information Centre, i-Sailing and Dolphin Cruises, Bike Riding Trails, i-Bay Discovery Centre, izinkundla zegalofu zomphakathi nezizimele kanye ne-Beach House enama-slides amanzi avaliwe angu-3 ashisayo, inqaba yokudlala enezindaba ezi-5, izimoto ze-dodgem kanye igalofu elincane.
I-Glenelg iqhele ngemizuzu engama-40 ukusuka ezifundeni zewayini ezidumile njengeBarossa Valley kanye neMcClaren Vale.